Kismaayo News » Axmed Cumar Jees oo Kismaayo lagu soo dhaweeyay
Axmed Cumar Jees oo Kismaayo lagu soo dhaweeyay
Kn: Col. Axmed Cumar Jees ayaa markii ugu horaysay mudo 17 sano ka badan dib ugu soo laabtay magaalo xeebeedka Kismaayo, waxaana garoonka caalamiga ee Kismaayo ku soo dhaweeyay cuqaal iyo akhyaar kale.
Col. Jees oo kamid ahaa raggii ay soo martay maamulista iyo gacan ku haynta magaalada Kismaayo ayaa aad uga helay isbadalka ku dhacay magaalada iyo horumarka dhankasta ah ee ka muuqda.
Jees wuxuu ahaa hogaamiyihii jabhaddii SPM garabkii Bay iyo Bakool, waxaana la sheegaa qabsashadiisii garoonka Balidoogle iyo Afgooye inay ku kaliftay Allaha u naxariistee Siyaad Bare inuu Xamar isaga baxo. Kadib dagaalkii qabaliga ee beelaha Daarood iyo Hawiye wuxuu noqday wasiirka gaashaandhigga, halka Allaha u naxariistee Aadan Gabyow uu ahaa gudoomiyaha SPM oo markaasi beelaha Daarood ku midaysnaayeen, laakiin markii Allaha u naxariistee Gen. Caydiid ay dib uga qabsadeen Kismaayo ayay SPM u kala jabtay 2 garab oo mid hogaaminayo Jees kan kalana Aadan Gabyow. Khilaafka waxaa sal u ahaa gudoomiyanimada ururka oo Gabyow iyo Jees isku qabsadeen iyo maamulka magaalada oo la isku fahmi waayay. Shir maalmo socday oo ka dhacay madaxtooyada ayaa lagu soo bandhigay in 75% ay beesha Absame qaadato maamulka halka 25% ay beelaha kale wadaagaan laakiin arintaasi waxaa diiday oo lamarsiin waayay garabka Jees hogaaminayay kuwaasi oo yiri “kaan ogaynow arliga Absamaa iska leh”. Kadib waxaa dhacay dagaalkii Daaroodka dhexdiisa ah oo ay kala hogaaminayeen Col. Axmed Cumar Jees iyo Maxamed Siciid Morgan, waxaana banaanka loo saaray Jees iyo maleeshiyaadkiisa, halka Gabyow iyo Morgan ay ku hareen magaalada. Waxaa la sheegaa in Jees iyo Morgan ay Kismaayo ku galeen dagaalkii ugu dabo dheeraa uguna khasaare badnaa ee abid ku dhexmara magaaladaasi darafyadii ku hardamayay gacan ku haynteeda.
Col. Jees wuxuu la bahoobay Gen. Caydiid waxayna samaynteen ururkii SNA kaasi oo markii danbe gacanta ku dhigay dhamaan deegaamada Jubbooyinka iyo Gedo. Markii Maraykanku soo galay dalka, Jees oo markaasi gacanta ku hayay Kismaayo ayaa waxaa u tagay sargaalkii hogaaminayay ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya yimid wuxuuna ula tagay fikir ah in gobolka nabad lagu soo dabaalo oo isaga baxo SNA, si Daaroodka koonfureed loogu mideeyo maamul ay Jubbaland yeelato taasi oo macnaheedu ahaa inay heshiiyaan asaga iyo Gen. Maxamed Siciid Moorgan oo markaasi u baxsaday Kenya laakiin Jees oo arintaasi ka xanaaqay ayaa sigaar uu cabayay wajiga ooga dhuftay sargaalkii Maraykanka ahaa. Waxaa la sheegaa inuu sargaalku isla goobta ku yiri way inoo tahay hadaad Kismaayo sii joogtana maradayda nin kuma jiro.
Wax yar kadib, Kismaayo waxaa la keenay ciidamo nabad ilaalin isla mar ahaantaana bilaabay inay hubkadhigis ku sameeyaan maleeshiyadii Jees, halka intay soo hubeeyeen ay Morgan dib ugu soo celiyeen. Jees wuxuu u baxsaday Muqdisho wuxuuna ku biiray gulufkii Maraykan iska caabinta ee magaalada ka dhacay. Sida ay waagaasi baahisay jariiradda afka dheer ee CNN, Col. Jees oo SNA u qaabilsanaa Gaashaandhigga wuxuu lahaa kaartadii ciidamada Maraykanka looga adkaaday.
Col. Jees ayaa markale dib ugu laabtay asagoo xulufo la ah isbahaysigii Dooxada Jubba ee Kismaayo ka cayrsaday Gen. Moorgan, isbahaysigaasi oo ka koobnaa daraf uu hogaaminayay Col. Barre Hiiraale, daraf uu hogaaminayay Goobaale iyo daraf uu asagu hogaaminayay. Waxaa la sheegaa inay xiligaasi ugu danbaysay magaalada Kismaayo kadib markii khilaaf soo kala dhexgalay asaga iyo Jifadiisa.
Jees wuxuu soo noqday xubin baarlamaan ahna gudoomiyaha gudigga difaaca ee baarlamaankii ku meel gaarka haa ee dawladdi Allaha u naxariistee Col. Cabdullaahi Yuusuf, wixii ka danbeeyayna wuxuu siyaasadda dalka ka galay nasasho, walow sida la sheegay uu dhinaca la talinta ka caawin jiray dawladihii Sh. Shafiir iyo tii Xasan Sheekh.
In kabadan 17 kadib ayuu maanta Col. Axmed Cumar Jees dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo asagoo aad ula dhacsan isbadalka ka muuqda magaalada, dhinaca amaanka, dhinaca hormarka kaabayaasha dhaqaalaha, dhinaca fiditaanka iyo dhismayaasha cusub iyo waliba dhinaca isdhexgalka bulshada iyo sida magaaladu u camirantahay.
Fiiro Gaar ah: Macluumaadka kore waxaan uga gol-leenahay oo kaliya sheegista inyar oo kamid ah taariikhda Col. Axmed Cumar Jees ee gobolka.